‘क्यान्सर प्रतिष्ठान’का विषयमा किन बोल्दैनन् प्रचण्ड ? – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर ७ गते १७:५६
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरलाई ‘क्यान्सर प्रतिष्ठान’ बनाउने योजना अस्पताल सञ्चालक समितिको छ । २१ पुस ०७३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अस्पताललाई क्यान्सर प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउनका लागि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकदेखि सञ्चालक समितिले समेत सक्रियता बढाइरहेका छन् ।
क्यान्सर प्रतिष्ठानबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा ठूला राजनीतिक दललाई बुझाउने काममा सञ्चालक समिति तल्लीन छ । यसैका लागि अस्पतालले आफ्ना स–साना कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा गर्दै आएको । बिहीबार स्नातक तहको आंगिक नर्सिङ कलेजको उद्घाटनमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुखअतिथि बनाइएको थियो । यसक्रममा प्रचण्डले क्यान्सर प्रतिष्ठानबारे केही बोल्लान र आडभरोसा पाइएला भन्ने अस्पताल प्रशासनको आशा थियो ।
मन्तव्य दिन बोलाउँदा कार्यक्रम सञ्चालकले प्रचण्डलाई क्यान्सर प्रतिष्ठानबारे बोलिदिन अनुरोध पनि गरे । आयोजकले अनुरोध नै गरिसकेपछि त उनले केही त बोल्लान् भन्ने सबैको अनुमान थियो । तर, सबैको अनुमान गलत साबित भयो । प्रतिष्ठानका विषयमा उनले उच्चारणसमेत गरेनन् ।
मन्तव्य दिन बोलाउँदा कार्यक्रम सञ्चालकले प्रचण्डलाई क्यान्सर प्रतिष्ठानबारे बोलिदिन अनुरोध पनि गरे । आयोजकले अनुरोध नै गरिसकेपछि त उनले केही त बोल्लान् भन्ने सबैको अनुमान थियो । तर, सबैको अनुमान गलत साबित भयो । प्रतिष्ठानका विषयमा उनले उच्चारणसमेत गरेनन् । बरु उनले क्यान्सररोग र केही विकास–निर्माणका कुरामा ५ मिनेट खर्चिएर मन्तव्य टुंग्याए ।
कार्यक्रममा दर्शकको अर्को खुल्दुली थियो– प्रचण्डले सिटीहलका विषयमा के बोल्लान् ? तर, यो विषयमा पनि उनि मौन रहे । उनी सिटीहल र क्यान्सर प्रतिष्ठानका विषयमा किन मौन रहे त ? यो विषय अनुमान गर्न कठिन छ । तर, कार्यक्रमको समापनमा प्रचण्डपुत्री तथा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले क्यान्सर अस्पताललाई यही अवस्थामा क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउन नसकिने धारणा राख्दा प्रचण्ड पनि क्यान्सर प्रतिष्ठानको पक्षमा छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बरु प्रचण्डले क्यान्सर अस्पतालमा सिटीहल बनाउन पहल गर्न सक्छन् । त्यही संकेतअनुरूप दाहालले विकास–निर्माणमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको हुनुपर्छ ।
क्यान्सर अस्पतालमा शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाउनका लागि ३ वर्षअघि नै अस्पताल सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले पारित गरिसकेको थियो । क्यान्सरसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न अस्पतालले खाका नै तयार पारेको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालाई समितिले योजनाबारे खाका बुझाएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि यो विषय सेलाउँदै गएको थियो । फेरि एक वर्षअघि अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विजयचन्द्र आचार्यको टोली मन्त्रालयमा डेलिगेसन गए पनि मन्त्रालयबाट केही काम हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय कमजोर बनेको कांग्रेसले इच्छा देखाएकै कारणले सत्तारुढ नेकपाको प्रतिष्ठान बनाउने कुरामा अनिच्छा हो भने प्रतिष्ठान बन्ने कुरा थप अनिश्चित हुनेछ । अन्यथा नेपालकै प्रतिष्ठित यो संस्थालाई पूर्वाधार थपेर प्रतिष्ठान बनाउँदा के बिग्रन्छ ?
क्यान्सर अस्पतालका शैक्षिक विभाग प्रमुख डा. शिवजी पौडेलले आफूहरूसँग २० वर्षको अनुभव भएकाले यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा लैजान गाह्रो नहुने बताए । स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा भिन्न कुरा भएकाले यसलाई छुट्टाछुट्टै विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘क्यान्सर अस्पतालको संरचना, विशेषज्ञको अनुभवले गर्दा स्वास्थ्यसेवा दिन कुनै बाधा हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्यसेवासँगसँगै स्वास्थ्य शिक्षा पनि आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा हो ।’
एउटा नेताले भनेको भरमा क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउन त्यति सजिलो भने छैन । मेडिकल काउन्सिलले तयार पारेको आवश्यक पूर्वाधार पूरा हुनुपर्छ । अस्पतालको पूर्वाधार, बिरामीको चाप, दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर, क्यान्सर अस्पताललाई तत्काल आवश्यक परेको रेडियोथेरापी टेक्निसियन, प्याथोलोजीजस्ता विषयमा पढाइ गर्न सकिने पौडेलको धारणा छ । ‘सबै एकैपटक त हुँदैन, मेडिकल काउन्सिलका मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै–बिस्तारै प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ ।’ यो कुरामा त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सबैभन्दा प्रभावशाली नेतासँग अस्पतालको अपेक्षा स्वाभाविक थियो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजेन्द्र वाग्ले बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई राज्यले ऐन बनाएर क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘राज्यले ऐन बनाउनुपर्छ । जुन–जुन विषयमा योग्यता पुगेको छ, त्यहीअनुसार जाने हो । यहाँ सबै संकायमा त मापदण्ड पनि नपुग्न सक्छ । तर बाहिरबाट हेर्दा धेरैजसो मापदण्ड पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउनका लागि सहयोग गर्न हामी तयार छौँ ।’
क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउने विषय आफैँमा चुनौतीको विषय हो । प्रतिष्ठान बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि ऐन संसद्मा लैजानुपर्छ । तर, यस विषयमा राज्य उदासीन देखिएको क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विजयचन्द्र आचार्य बताउँछन् । ‘अस्पताललाई क्यान्सर विषयसँगसम्बन्धी उच्च अध्ययनका लागि प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गराउने हो । हामीलाई भौतिक संरचना पूर्णतया पुग्छ । हिजो हामीसँग २ सय शय्या थियो, अहिले ४ सयभन्दा बढी पुगेको छ । दक्ष जनशक्तिको पनि विकास भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘राज्यले चासो दियो भने नसक्ने कुरा त अवश्य छैन ।’ नेपालको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको अस्पतालमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी बिरामी देशभर र भारतबाट पनि ओपिडीमा जाँच गराउन आउने गर्छन् ।
नेपाली कांग्रेस बिपीको नाममा क्यान्सर स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बनाउने पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले नै यसका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा भने मौन छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय कमजोर बनेको कांग्रेसले इच्छा देखाएकै कारणले सत्तारुढ नेकपाको प्रतिष्ठान बनाउने कुरामा अनिच्छा हो भने प्रतिष्ठान बन्ने कुरा थप अनिश्चित हुनेछ । अन्यथा नेपालकै प्रतिष्ठित यो संस्थालाई पूर्वाधार थपेर प्रतिष्ठान बनाउँदा के बिग्रन्छ ? क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा सिटीहलका लागि दिन नहुने पक्षमा नेपाली कांगेस छ । ७५ बिघा १० कठ्ठा जग्गामा फैलिएको क्यान्सर अस्पतालको ७ बिघा क्षेत्रफलमा सिटीहल बनाउने निर्णय महानगरले गरेको छ । यसरी सत्तापक्ष र विपक्ष दुई ध्रुवमा रहँदा अस्पतालमा क्यान्सर प्रतिष्ठान र सिटीहल बन्ला त ? प्रश्न गम्भीर छ ।
Tags: प्रचण्ड, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर